Ụdị akụkọ: ole nhazi ọkwa dị na gịnị bụ ha | Akwụkwọ ugbu a
Iche echiche n'ime akụkọ na -emetụtakarị ndị na -ege ntị ụmụaka. Agbanyeghị, nke a ekwesịghị ịbụ ikpe ebe enwere ọtụtụ ụdị akụkọ. Ụfọdụ n'ime ha na -elekwasị anya na ndị toro eto na -ege ntị, ebe ndị ọzọ nwere ọtụtụ isiokwu ụmụaka ga -abụ maka ụmụaka.
Mana kedu ụdị akụkọ dị? Kedu ihe onye ọ bụla n'ime ha gbasara? Ọ bụrụ na ọchịchọ ịmata gị emetụla gị, mgbe ahụ anyị ga -ekwu maka ya.
1 Kedu ihe bụ akụkọ
2 Kedu ụdị akụkọ dị?
2.1 Akụkọ ifo
2.2 Akụkọ anụmanụ
2.3 Akụkọ banyere kọstọm
2.5 Ezi uche
2.6 Nke mistery
2.8 Nke ntochi
2.9 Nke akụkọ ihe mere eme
2.10 Ndị Rom
2.11 Ndị uwe ojii
2.12 Akụkọ sayensị
3 Ihe na -eme ka akụkọ bata n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ
Kedu ihe bụ akụkọ
A kọwapụtara akụkọ dị ka akụkọ dị mkpirikpi, nke nwere ike ma ọ bụ ghara ịdabere na ihe mere eme n'ezie, na ibelata mkpụrụedemede ya. Arụmụka nke akụkọ ndị a dị nfe ma enwere ike ikwu ya site n'ụzọ ọnụ ma ọ bụ ederede. N'ime ya, a na -agwakọta akụkụ akụkọ ifo na ezigbo ihe mere eme, a na -ejikwa ya ịkọ akụkọ kamakwa iji nyere ụmụaka aka ịmụta ụkpụrụ, omume ọma, wdg.
La Ọdịdị akụkọ a dabere na akụkụ atọ akọwapụtara nke ọma na ha niile:
Okwu mmeghe, ebe a na -ewebata mkpụrụedemede ndị ahụ ma tinye ha na nsogbu ha nwere.
Otu eriri, ebe a na -emikpu ihe odide na nsogbu ahụ n'ihi na ihe merela nke na -egbochi ihe niile ịma mma dịka na mmalite.
Nsonaazụ, nke na -eme mgbe achọtara ngwọta maka nsogbu ahụ iji nwee ọ endingụ ọzọ, nke nwere ike ịdị ka mmalite.
Kedu ụdị akụkọ dị?
Anyị enweghị ike ịgwa gị na enwere otu nhazi ụdị akụkọ dị adị, ebe enwere ndị edemede na -edepụta ha n'ọnụ ọgụgụ karịa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, dịka nkuzi nke José María Merino si kwuo, "Site na akụkọ a ma ama ruo n'akụkọ ifo", enwere ụdị akụkọ abụọ:
Akụkọ a ma ama. Ọ bụ akụkọ ọdịnala ebe a na -egosi akụkọ ụfọdụ ndị na -agụ akụkọ. Nke a, n'aka nke ya, kewara n'ime akụkọ ifo, anụmanụ, akụkọ ifo na akụkọ omenala. Na mgbakwunye, ijikọ ha niile ga -abụ akụkọ ifo na akụkọ ifo, n'agbanyeghị na agaghị etinye ha na nkewa akụkọ a ma ama.
Akụkọ akụkọ: bụ ọrụ ahụ a na -ebunye site na ide. Otu n'ime ihe echekwara ochie bụ El conde Lucanor, ihe mejupụtara akụkọ 51 sitere na mmalite dị iche iche, nke Don Juan Manuel dere. Ọ bụ n'ime nnukwu ụdị a ka anyị nwere ike ịhụ nkewa ka ukwuu, ebe ọ bụ akụkọ mere eme, ihe omimi, akụkọ ihe mere eme, ihunanya, uwe ojii, echiche efu ...
Ndị edemede ndị ọzọ ahụghị nhazi ọkwa a yana tulee na nkewa bụ n'ezie ụdị akụkọ nke dị. Ya mere, ndị kachasị ewu ewu ga -abụ:
A ga -akọwa ya n'ime akụkọ na -ewu ewu, otu n'ime ihe ndị kacha agụ ma mara site na ịbụ akụkọ na -adịghị adị, nke na -eme n'oge na ohere amaghị na nke nwere ule a ga -emerịrị iji rute ngwụsị obi ụtọ.
N'ime ha ndị protagonists abụghị ndị mmadụ, mana anumanu nwere agwa mmadu. Mgbe ụfọdụ ụmụ mmadụ nwere ike isonyere anụmanụ, mana ndị a ga -eme ihe dị n'azụ.
Akụkọ banyere kọstọm
Ha bụ akụkọ na -achọ ịkatọ ọha mmadụ ma ọ bụ oge a na -akọ akụkọ ahụ, mgbe ụfọdụ site na satire ma ọ bụ ọchị.
A ga -etinye ha n'ime akụkọ edemede, mana ọtụtụ kwenyere na ha nwekwara ike bụrụ akụkọ ama ama. N'okwu a, akụkọ a dabere na ihe echepụtara ebe anwansi, ịgba afa na ihe odide nwere ike pụtara.
Ha bụ ndị na -akọwa ihe nkiri kwa ụbọchị, nke ejiri ya eme ihe ụmụaka nwere ike mata onwe ha ma, n'ụzọ dị otu a, mụta ihe.
A na -amata ha site n'ịchọ na onye na -agụ ya ga -ejigide akụkọ ahụ n'ụzọ na ọ ga -ebi ndụ otu ihe ahụ dị ka onye akụkọ.
N'adịghị ka nke gara aga, ebe a na -achọ aghụghọ, ebe a bụ egwu ga -eji atụmatụ ahụ mara ya. Mana eburu n'uche na onye na -agụ ya ga -ahụ otu ihe ahụ dị ka onye protagonist, nke ahụ na -atụ ụjọ ma na -ebi ndụ ụjọ nke a kọrọ na akụkọ ahụ.
Ebumnuche gị bụ igosipụta a akụkọ na -atọ ọchị nke na -eme onye na -agụ ya ọchị, ma ọ bụ site na njakịrị, ọnọdụ na -akpa ọchị, mkpụrụedemede na -agbagwoju anya, wdg.
Nke akụkọ ihe mere eme
Ọ naghị akọwa eziokwu nke akụkọ ihe mere eme, mana ha na -eji ezigbo eziokwu ahụ chọta mkpụrụedemede na oge na oghere, mana ha ekwesịghị ikwesị ntụkwasị obi nye eziokwu.
Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike bụrụ akụkọ gbasara Leonardo Da Vinci otu ụbọchị mgbe ọ kwụsịrị ịse ihe. Amaara na agwa ahụ dị na akụkọ ahụ dị n'ime oghere ahụ, mana ọ gaghị abụ ihe mere n'ezie.
Ndabere nke akụkọ ndị a bụ akụkọ nke isi okwu ya bụ ịhụnanya dị n'etiti mkpụrụedemede abụọ.
N'ime ha bụ nkata ahụ dabere na mpụ, mpụ ma ọ bụ ịkọwa nsogbu site na mkpụrụedemede ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị nyocha.
Ha bụ ndị dị n'ọdịniihu ma ọ bụ ugbu a mana ha nwere ọmarịcha teknụzụ (nke na -adịghị na ndụ n'ezie).
Ihe na -eme ka akụkọ bata n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ
Were ya na ị ga -akọrọ nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwanyị, nwa nwanne gị ma ọ bụ nwa nwanne gị nwanyị ... Ma ọ bụ ịkọ akụkọ nke ị marala. Dabere na nhazi ọkwa a dị n'elu, nke a nwere ike bụrụ akụkọ ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ọ na -eme ụfọdụ nkewa akụkọ ndị ahụ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ihe ị na -eme bụ ịgụ akwụkwọ akụkọ, ọ ga -adaba n'akwụkwọ ọgụgụ, ebe a ga -ebufe ya site na ide.
N'ezie Mgbe ị na -eke akụkọ, enwere ike ime ya n'ọtụtụ ụzọ:
Ma a kọọrọ ya ma ọ bụ gụọ ya (edere ya).
Ma ọ dị egwu, akụkọ ifo, akụkọ ifo, ndị uwe ojii, di na nwunye ...
Ọbụna ụfọdụ Enwere ike ikekọta akụkọ n'ime ụzọ abụọ ma ọ bụ karịa ebe ọ bụ na n'oge ịdepụta ya, enwere ike ịme ya dịka mkpụrụedemede ma ọ bụ dịka atụmatụ ahụ siri dị. Dịka ọmụmaatụ, were ya na agwa ndị ahụ bụ anụmanụ nwere njirimara mmadụ (ha na -ekwu okwu, echiche, wdg). Anyị ga -eche akụkọ akụkọ ụmụ anụmanụ ihu. Mana gịnị ma ọ bụrụ na agwa ndị ahụ bụ ndị nyocha na -enyocha ohi n'ime ọhịa? Anyị abanyela akụkọ ụmụaka ndị uwe ojii.
Enyela ihe dị oke mkpa na ịchọrọ ịkewa akwụkwọ. Naanị ndị nkwusa na -ekewa ha wee mee nke a iji dobe "usoro" na katalọgụ akwụkwọ ha, yana ịmata akwụkwọ ha kwesịrị ibipụta na nke ha na -ekwesịghị ibipụta. Mana mgbe a bịara n'iche maka ndị na -agụ ya, ha ga -agụ akụkọ ndị dabere na ụtọ ha, na -enwe ike ịgwakọta ụdị na, yabụ, bụrụ ihe mbụ iju ha anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ụdị akụkọ
Leopoldo Panero. Afọ ncheta ọmụmụ ya. Ụfọdụ uri